माघ २४ मै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन होला ? | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-10-22T09:47:42.683633+05:45
माघ २४ मै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन होला ?
काठमाडौं–लामो विवादपछि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिन् ।
त्यसपछि तुरन्तै समानुपातिक निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुने, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन सकिएको डेढ महिना बितिसकेको छ । तर, सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्ने निर्णय लिन सकेको छैन् ।
संविधानतः प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी सरकारले तोक्ने प्रावधान छ । तर, अहिलेको सरकारले हतारमा यस्तो निर्णय लिन चाहेको छैन् ।
यसलाई बामगठबन्धनले सत्ताको आयु लम्बाउने ‘चालबाजी’ का रुपमा हेरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुख नियुत्तिमा ढिलाई हुँदा निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा तर्फको समानुपातिक मत परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन पाएको छैन ।
प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सांसदलाई सपथ खुवाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
शुरुमा राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश विवादका कारण प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी नियुत्ति प्रक्रिया ढिलाई भएको थियो ।
लामो विवादपछि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश त राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिन् ।
तर, त्यसपछि पनि प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिन सकेन ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि माघ २४ गतेको दिन तय भैसकेको छ । त्यसका लागि माघ ७ गते अन्तिम नामवली प्रकाशन गर्ने दिन छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश सांसदलाई सपथ खुवाउने स्थान र व्यक्ति नियत्ति भएका छैनन् । राष्ट्रिय सभाका लागि स्थानीय तहका प्रमुख/उप्रमुख सहित दुई हजार ५६ मतदाता रहेका छन् ।
एक मन्त्रीले चाहिँ सर्वदलीय सहमतिका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताए । सिंचाइमन्त्री सञ्जय गौतमले यस अघिको सर्वदलीय वैठकमा विपक्षले आफ्नो राय दिएको तर सरकारलाई सर्वाधिकार नदिएको जनाए ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय वैठकमा सवै दलले अस्थायी केन्द्र र प्रदेश प्रमुख तोकेर जान सुझाव दिएका थिए । त्यति मात्र होइन राष्ट्रपतिले समेत प्रधानमन्त्रीलाई यी काम गर्न ‘दबाब’ दिएकी छिन् ।
काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले एमालेका कारण नै विलम्ब भएको दावी गरे । ‘सरकारले तोकेकासँग सपथ खादैनौँ भन्दै शुरुमा रोकियो । अन्तिममा आएर सरकारलाई नै स्विकृति दियौँ भनियो । यहीँकारण प्रक्रिया लम्विएको हो,’ उनले भने ।
सर्वदलीय वैठकमा सरकारले तोकेका प्रदेश प्रमुखबाट आफ्ना सांसदले सपथ नलिने अभिव्यक्ति एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको बताइएको थियो । तर, एमालले औपचारिक रुपमा यस्तो भनेको थिएन ।
यस्तो निर्णयमा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने भएपनि सरकारले यसतर्फ पनि खासै ध्यान दिएको छैन । बरु, बामगठबन्धनले छिटो टुंगाउन दवाव दिएका छन् ।
पुष १९ मा सर्वदलीय स्वीकृति पाएसँगै प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्न भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठक पनि बोलाइयो । तर, त्यस विषयमा कुनै निर्णय गरिएन ।
पुष २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषदमा बैठकले माघ २४ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने मिति तय गरि बैठक सकियो ।
पुष २१ को मन्त्रिपरिषद बैठकपछि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्को पटक बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी केन्द्र तोक्ने बताइएका थिए ।
गत विहिवार मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने भनिएपनि अनितम समयमा एक दिनका लागि सारियो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यी विषयमा कुनै निर्णय गरेन ।
राष्ट्रिय रुपमा योगदान गरेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुख तोक्न आग्रह गरिएको काँग्रेस नेता खाँणले बताए । काँग्रेसमा आस्थावानलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा नल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएको उनले बताए ।
सिञ्चाई मन्त्री गौतमले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरि प्रदेश प्रमुख र प्रदेश राजधानी छिटो तोकिने बताए ।